ူလူမှုရေးနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ်သင် ဆရာဆရာမများ၏ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← လွတ်မြောက်ဆဲ မြန်မာကလေးများစိုးရိမ်
ူလူမှုရေးနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ်သင် ဆရာဆရာမများ၏ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်	Posted on May 4, 2010	by bmta05 မေ ၃၊ ၂၀၁၀။
လူမှုရေးနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ် သင်ကြားသူ ဆရာ ဆရာများ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ CDC ကျောင်းတွင် ယနေ့ နံနက် ၉နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပညာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိုက်ဂ ရန့် ဒေသမှ ဆရာဆရာမ ၁၀၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲသို့ World Education , BMWEC (Burmese Migrant Education Committee ) , Curriculum Project , BMTA နှင့် MCT တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
တာဝန်ခံဆွေးနွေးသူအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းသင်ရိုးညွှန်းတန်းများ အကြောင်း ဒေါက်တာဘွဲ့ စာတမ်းရေးသားပြုစုနေသူ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဆရာမ Rose (မနှင်းဆီ) က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို MCT (Migrant Curriculum Team ) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး World Education မှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ အတွက် BMTA (Burmese Migrant Teachers’ Association ) က ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းသင်ကြားရာတွင် စဉ်စားတွေးခေါ်မှုကို အခြေခံသော သင်ကြားမှုများ ဖြစ်လာ စေရေးကို အားပေး ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ Curriculum Project မှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားသည့် ဆရာ ဆရာမ များအတွက် သင်တန်းတခုကိုလဲ တပြိုင်တည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါ သည်။ ထိုသင်တန်းကိုမူ CP ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် VSO ( Voluntary Service Oversea ) မှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာရပ် Trainer Miss Sian မှ တာဝန်ယူ ဆောင် ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
လူမှုရေးနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆရာ ဆရာမ ၇၀ကျော် တက်ရောက်လျှက်ရှိပြီး ၅ရက် ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ် သလို အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း တွင် ဆရာ ဆရာမ ၁၁ ဦး တက်ရောက်နေပြီး သင်တန်းကို ၃ရက် ပြုလုပ်သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in လှုပ်ရှားမှုများ, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← လွတ်မြောက်ဆဲ မြန်မာကလေးများစိုးရိမ်
B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association	Blog at WordPress.com.